Xildhibaan sheegay in buuq ay ku furayaan Farmaajo haddii uu golaha horkeeno heshiiskii doorashada. | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Xildhibaan sheegay in buuq ay ku furayaan Farmaajo haddii uu golaha horkeeno heshiiskii doorashada.
Xildhibaan sheegay in buuq ay ku furayaan Farmaajo haddii uu golaha horkeeno heshiiskii doorashada.
Xildhibaan Cabdi Shire Jaamac oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa uga digay Madaxweyne Farmaajo inuu maanta ka hadlo arrinta doorashada iyo heshiiskii dhowaan uu la gaaray Madaxda dowlad Goboleedyada ee ku saabsanaa nooca doorashada dalka ka dhaceysa.
Cabdi Shire oo la hadlayay Telefishinka Shabelle ayaa sheegay in haddii Madaxweynaha uu isku qaso arrinta doorashada iyo kalsooni siinta Ra’iisul Wasaaraha ay durbaano ku yeerin doonaan.
“Haddii Madaxweynaha isku dayo inuu nagala hadlo arrinta doorashada awal Firimbi ayaa la yeerin jiraye Durbaano iyo wax ka daran baaralamaanka lala soo geli doono oo aan ku yeerin doonaa” ayuu yiri Xildhibaan Cabdi Shire.
Xildhibaanka ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan heshiiska doorashada, ayna tahay nasiib darro waxa ay soo dhoodhoobeen Madaxweynaha iyo maamul goboleedyada, kuna hor kufeen shacabka Soomaaliyeed.
“Waxaan kula talinayaa Madaxweynaha iyo ciddii la talisa inaysan isku mataaneyn oo Ra’iisal wasaaraha aan la carqaladeyn, waxayse belo ka imaaneysa xildhibaannada oo aad u careysan inay hor keenaan heshiiska Doorashada”ayuu yiri.
Madaxweyne Farmaajo ayaa maanta khudbad u jeedinaya Baarlamaanka, ka hor inta aan codka kalsoonida loo qaadin Ra’iisul Wasaaraha magacaaban Maxamed Xuseen Rooble.
Raysal Wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo hadda la horgeeyay Baarlamanka.
Soomaaliya oo diyaar u ah inay ciidamo nabad ilaalin ah u dirto dalka Koonfurta Suudaan…